Radio Don Bosco - Marka 1, 29-39
Marka 1, 29-39
Tamin’izany andro izany, i Jesoa sy i Jakôba ary i Joany raha nivoaka avy tao amin’ny sinagôga, dia nankany an-tranon’i Simôna sy i Andre. Ary ny rafozam-bavin’i Simôna nandry teo am-pandriana fa nanavy, ka noresahin’izy ireo taminy niaraka tamin’izay. Dia nanatona nandray ny tanany i Jesoa sy nanarina azy, dia afaka ny tazony ka nanompo Azy izy. Nony hariva efa maty masoandro, dia nentina teo aminy ny marary rehetra sy ny azon’ny demony, ary ny tao an-tanàna rehetra nitangorona teo am-baravarana avokoa. Dia nanasitrana olona maro nararin’ny aretina samihafa Izy, sady nandroaka demony maro, fa tsy navelany hiteny ny demony, satria nahafantatra Azy. Nony ampitso nifoha maraina alina koa Izy, dia nivoaka nankany amin’ny tany mangina, ka nivavaka tany. Dia lasa nitady Azy i Simôna sy ny namany ka nony nahita Azy dia nilaza taminy hoe : "Tadiavin’ny olona rehetra Ianao". Fa izao no navaliny : "Andeha isika hankany amin’ny tanàna akaiky, mba hitoriako any koa ; fa izany no nivoahako". Dia lasa Izy nitory tamin’ny sinagôgan’ny olona sy eran’ny Galilea rehetra, sady nandroaka ny demony.